Jumeirah Maldives: Dhammaan hoteelada raaxada ee furan waxaa la furaa Oktoobar
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Maldives » Jumeirah Maldives: Dhammaan hoteelada raaxada ee furan waxaa la furaa Oktoobar
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • Wararka Maldives • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ku darista Jumeirah Group ee sii kordheysa ee hoteellada, martidu waxay hadda ogaan karaan Jumeirah Maldives, oo ah meel raaxo leh oo ku dhex taal biyaha qaxwaha leh ee Waqooyiga Malé Atoll.
Kooxda Jumeirah ayaa Maldives ka furtay goob dalxiis oo cusub.
Jumeirah Maldives waxay soo dhaweyn doontaa martida koowaad Oktoobar 1, 2021.
Jumeirah Maldives waxay bixisaa 67 xeeb iyo guryo biyo ka badan.
Jumeirah Group, oo ah shirkadda martigelinta raaxada ee caalamiga ah isla markaana xubin ka ah Dubai Holding, ayaa maanta ku dhawaaqday dalxiis cusub oo caalami ah, Jumeirah Maldives, kaasoo soo dhaweyn doona martidiisii ​​ugu horreysay laga bilaabo Oktoobar 1, 2021.
Ku darida Kooxda JumeirahFaa'iidooyinka hoteellada ee sii kordhaya, martidu waxay hadda ogaan karaan Jumeirah Maldives, oo ah meel raaxo leh oo ku dhex taal biyaha turquoise-ka ee Waqooyiga Malé Atoll, oo si fudud loogu gaari karo doonyaha dheereeya ama badda ka soo degta Madaarka Malé. Meelkeeda aan fiicnayn waxay siisaa asturnaanta marinnada jacaylka, dib -u -noqoshada jasiiradda ee saaxiibbada iyo qoyska iyo waaya -aragnimada si ay ugu haboonaato socotada firfircoon.
Dhismaha panoramic -ka ee la yaabka leh iyo gudaha dejinta ayaa ah shaqada istuudiyaha naqshadeynta ee Singapore, Miaja, oo abuuray hab -dhaqan casri ah oo la jaanqaadaya bay'ada dabiiciga ah, oo ku celcelinaysa jaadka casriga ah ee Mediterranean -ka - oo ah naqshad ka duwan kuwa kale.
José Silva, Madaxa Sare ee Kooxda Jumeirah, ayaa yiri: “Reer Maldives waa safar aad loo jecel yahay oo loogu talagalay dadka safarka ah ee ka kala yimid daafaha dunida Jumeirah Maldives waa goob loo maro ballanqaadkayaga astaanta ah ee Kala Duwanaansho. Dalxiisku wuxuu bixiyaa soo dhaweyn aan caadi ahayn oo leh dareen dhab ah oo ka badan filashooyinka martida, isagoo riixaya xadka naqshadeynta, cunnada iyo khibradda adeegga. Ku-soo-biirid dhab ah oo ku-biirinta faylalka sumadda, Guriga cusub ee Jumeirah Group ee Maldives wuxuu dammaanad-qaadayaa waayo-aragnimo marti ah oo aan caadi ahayn isla markii ay cagaha soo dhigeen hoteelkeenna cusub ee casriga ah. ”
Jumeirah Maldives waxay bixisaa 67 xeebood iyo tuulooyin biyo-dhaaf ah oo ku yaal hal, laba- iyo sedex qol jiif, dhammaantoodna waxay xaqiijinayaan aragtiyo yaab leh oo badweynta Hindiya ah. Laga bilaabo laga bilaabo 171sqm, villa -yada loo dalxiis tago waxay ka mid yihiin kuwa ugu ballaaran Waqooyiga Malé Atoll. Guri kasta wuxuu leeyahay barkad aan dhammaad lahayn oo gaar loo leeyahay iyo barxad weyn oo saqafka sare leh oo leh goob wax lagu cunteeyo oo loogu talagalay martida si ay u qaataan aragtiyaha xiisaha leh iyagoo ku mashquulsan suxuunta cunnada ee macaan ama ku raaxeysanaya waayo-aragnimada filim-ka-hooseeya xiddigaha, halka Villas saddex qol jiif ah ayaa sidoo kale ku faana jimicsi u gaar ah.
Kooxda Jumeirah, oo xubin ka ah Dubai Holding iyo shirkad hudheel raaxo leh oo caalami ah, waxay ka shaqaysaa 6,500+-faylka jaadka 24 guri oo ku yaal Bariga Dhexe oo dhan (oo ay ku jiraan calanka Burj Al Arab Jumeirah) Yurub iyo Aasiya, oo leh guryo badan oo hadda la dhisayo agagaarka caalamka
Caafimaadka iyo badbaadada martida iyo asxaabta ayaa ah mudnaanta ugu weyn ee Kooxda Jumeirah. Waxay ka hirgalisay dhammaan tallaabooyin ilaalin ah dhammaan hoteellada, iyada oo si adag u hoggaansameysa awaamiirtii Dowladda ee suuq kasta.